कोरोना संक्रमणबाट सयौंले ज्यान गुमाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो लज्जास्पद अभिव्यक्ति — Sanchar Kendra
१आज ३७५० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ६७ को मृत्यु
२सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध जाने भयो एमाले, सुवास नेम्वाङको यस्ताे खुलासाले ओली तनावमा
३काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा लम्ब्याइदै
४पदभार सम्हालेकाे २४ घण्टा नबित्दै गृहमन्त्री अधिकारीले चाले यस्तो कदम, ७७ वटै जिल्लालाई गयो सर्कुलर
५दाङको तुल्सीपुरमा गो’ली चल्यो, १ युवक पक्राउ
६सञ्चारकेन्द्रका समाचारहरु अव मेरो कुंडली एपमा पनि
७राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा फेरि पदमुक्त
८आज बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
९बालुवाटरमा प्रदर्शन गर्ने नागरिक अगुवामाथि धरपकड, नारायण वाग्ले रखगेन्द्र संग्रौलासहित १८ जना पक्राउ
१०कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने रामदेवको घोषणा
११सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली नजाने
१२सर्वोच्चले आफ्नै परमाधेशविपरीत अन्तरिम आदेश दियो- मुख्यमन्त्री पोखरेल
काठमाडौँ । नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट दैनिक २०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाउन परेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लज्जास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले बेडको अभाव नभएको बताएका छन् । देशकै ठूलो सिटीहल उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बिरामीहरुको उपचारका लागि बेडको अभाव नभएको बताएका हुन् ।
‘हामीसँग बेडको अभाव छैन, सुविधा सम्पन्न अस्पताल जाने चाहने देखिन्छ, अक्सिजनसहितका बेडहरू, अन्य उपकरणसहितका बेडहरू, चिकित्सक सहितको बेडको प्रबन्ध गर्ने तयारी गरेका छौँ, देशभित्रका प्लान्टलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्‍चालन गर्ने प्रयास गरिएको छ।
ओलीले भने,’हाम्रा सरोकारवाला सम्बन्धित निकाय, संघसंस्थाहरू अझ प्रभाकारी कदमहरू तीव्रताका साथ उपचारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरू कमी हुन नदिने गरी तयारी गरेका छौँ ।’
राजधानीकै अस्पतालहरुमा वेड नपाएर बिरामीको बेहाल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् । राजधानीको विभिन्न अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरु बेड नपाएर बाहिर उपचार गराउन बाध्य छन् । कतिपय निजी अस्पतालले बेड अभाव कै कारण नयाँ बिरामी भर्ना नगर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेका छन् ।
उता कोरोना संक्रमितको उपचारमा सक्रिय रहेको मकवानपुरको हेटौँडा अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएको छ । पछिल्लो समय जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेसँगै संक्रमितहरुको उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको अक्सिजन अभाव भएको हेटौँडा अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालमा अन्य जिल्लाबाट अक्सिजन आपूर्ति हुँदै आएको थियो । अस्पतालले २ सय ७३ वटा अक्सिजन सिलिन्डरलाई आलोपालो गर्दै हालसम्म संक्रमितहरुको उपचारमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । अस्पतालमा एकदिनमा करिब २ सय ५० वटा अक्सिजन सिलिन्डर खपत हुँदै आएको हेटौँडा अस्पतालका कोभिड इन्चार्ज डा. सागर काफ्ले बताउँछन् । जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट नहुँदा र अन्य जिल्लामा भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएको हो ।
अस्पतालले ५१ वेड क्षमताको भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू, एचडीयू र स्टेप डाउन कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ । संचालनमा रहेका भेन्टिलेटर, आईसीयू, एचडीयूका सबै वेड संक्रमित विरामीले भरिएका छन् । हेटौँडा अस्पताललाई विरामीको चाप थेग्न समस्या हुन थालेपछि जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र मकवानपुरले चुरेहिल अस्पताल र मकवानपुर सहकारी अस्पताललाई समेत कोरोना अस्पतालको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । कुल ३० वेड क्षमताको दुबै अस्पतालमा पनि अक्सिजन अभावका कारण शुक्रबारबाट उपचार सेवा बन्द भएको छ ।
हेटौंडा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि अस्पताल विकास समितिमा पूर्व अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले पटक–पटक अक्सिजन प्लान्ट निमार्णका लागि बागमती प्रदेश सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका थिए । अस्पतालले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका विभिन्न निकायमा अक्सिजन प्लान्टसहित अन्य सेवा विस्तारका लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर, उक्त प्रस्तावमाथि प्रदेश सरकारका कुनैपनि निकायले चासो नदेखाएको पूर्वअध्यक्ष पौडेल गुनासो गर्छन् ।
अध्यक्ष पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको २०७७/०७८ को जेठ महिनाबाट अस्पतालको नयाँ भवनमा सिटी स्क्यान र अक्सिजन प्लान्टसहितको अन्य सेवा विस्तारका लागि मुख्यमन्त्री डाेरमणि पौडेल र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ७२ करोडको प्रस्ताव पेश गरेको भएपनि उक्त प्रस्तावमा कुनैपनि निकायले चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।
यसअघि अक्सिजन सेवा सञ्चालनका लागि अस्पतालमा २५ बेडमा अक्सिजन पाइप जडानको काम भइसकेको थियो । तत्कालिन अस्पताल व्यवस्थापन समितिले उक्त वेड विस्तार गरी ३ सय पु¥याउने योजनासहित प्रदेश सरकारसंग उक्त रकम माग गरेको थियो ।
हाल अस्पताल प्रदेश सरकार मातहतको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईका छोरा राजेश प्रसाईलाई उक्त प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार पदमा नियुक्त गरीएको छ । प्रसाईको नेतृत्वमा पनि अस्पताल सुधार एवम् सेवा विस्तारका कुनैपनि काम नभएको सर्वसाधारणको गुनासो छ । अस्पतालको नाम, लोगो र अस्पताल व्यवस्थापन समिति परिवर्तन भएपनि अस्पतालमा उल्लेख्य सुधार भने हुन सकेको छैन ।
कोरोना संक्रमित छट्पटाउँदै
हेटौँडा अस्पतालमा ५० जना भन्दा बढी कोरोना संक्रमित विरामीहरु उपचाररत छन् । अस्पतालले दिएको जानकारी अनुसार, हालसम्म अस्पतालमा कुल १५ जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भइसकेको छ भने करिव २० जना संक्रमितहरुको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म हेटौँडा अस्पतालमा उपचाररत विरामीहरुका लागि केही घण्टाका लागि मात्रै पुग्ने अक्सिजन उपलब्ध छ । त्यसपछि विरामीहरुलाई अन्य अस्पतालमा पठाउने तयारी गर्नुबाहेक अस्पताल प्रशासनसँग कुनै विकल्प छैन ।
प्रदेशको राजधानी हेटौँडा मुख्यमन्त्री पौडेलको गृह जिल्ला हो । अस्पतालबाट करिव ५ किलोमिटर पश्चिममा बस्दै आएका मुख्यमन्त्रीलाई अस्पतालको अवस्था जानकारी भएपनि कुनै ठोस पहल भने हुन सकेको छैन । अस्पतालमा बिहिबार मात्रै एक्स–रे मेसिन बिग्रिएर स्वास्थ्यकर्मीहरु समस्यामा परेका छन् ।
उक्त मेसिन मर्मत हुने अवस्था नदेखेपछि स्वास्थ्यकर्मीहरुले अस्पताललाई मेसिन खरिदका लागि आग्रह गरे पनि प्रशासनले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन् । त्यति मात्र होइन अस्पतालको कोभिड वार्डका लागि अन्य थुप्रै स्वास्थ्य सामग्री आवश्यक रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।
अस्पतालमा अक्सिजनको अभावका कारण कोरोनाका बिरामीको भकाभक मृत्यु हुन थालेपछि रुपन्देहीमा नेपाली सेनाले राहतकाे कदम सुरू गरेकाे छ । बुधबार एकैदिन ८ जना काेराेना संक्रमितकाे मृत्यु भएपछि नेपाली सेनाको एमआई-१७ हेलिकप्टरले ४१ वटा अक्सिजन सिलिण्डर भैरहवा विमानस्थल झारेको हो।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले अक्सिजन अभावका कारण अस्पतालमा बिरामीहरूको ज्यान जोखिममा परेपछि हेलिकप्टरबाटै भए पनि ५० थान अक्सिजन सिलिण्डर रुपन्देही ल्याइएको जानकारी दिए।
तामाङले रुपन्देहीको उत्पादनले धान्न नसकेपछि तत्काल समस्या समाधान गर्न अक्सिजन सिलिण्डर ल्याइएको बताए। तामाङका अनुसार बुधबार ल्याइएका अक्सिजन सिलिण्डर भीम अस्पताल र लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालमा पठाइने छ।
बुधबार बाराको सिमराबाट र चितवनबाट ४१ थान सिलिण्डर नेपाली सेनाले ल्याएको र थप एक सय सिलिण्डर बिहीबार बिहान ल्याइने तामाङले बताए। यसैगरी, खाली भएका सिलिण्डर भर्न बुटवलबाट पोखरा, चितवन, वीरगन्ज, विराटनगर लगायतका स्थानहरूमा पठाइएको र ती सिलिण्डरसमेत आउने क्रममा रहेको तामाङले बताए।
हेलिकप्टरमार्फत् ल्याइएका सिलिण्डर लिन बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी आफैं भैरहवा विमानस्थल पुगेका थिए। तीमध्ये केही सिलिण्डर भीम अस्पताल र बाँकी सिलिण्डर बुटवल धागो कारखानास्थित कोरोना विशेष अस्पताल ल्याइने सुवेदीले बताए।
आधा घण्टामात्रै अक्सिजन आपूर्ति ढिलाइ हुँदा रुपन्देहीमा बुधबार ८ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। सेनाको यो कार्यले देशभर तरंग पैदा गरेको छ । अक्सिजन अभाव झेलिरहेका अन्य जिल्लाहरु पनि सेनाको यस्तै सहयोगको अपेक्षामा छन् ।